Sida loo ogaado xaaladda batteriga ee taleefankaaga Android | Androidsis
Ka hel ama ha jeclaan muddo kadib, baytariga taleefankayaga Android wuu dhammaanayaa. Xirashada ayaa ka sii weynaan karta ama ka yareyn karta iyadoo ku xiran adeegsiga qalabkayaga, marka lagu daro daaweynta aan ku siinay batteriga waqtigaas. Sidaa darteed, way wanaagsan tahay in la hubiyo waqti ka waqti haddii batterigu xaaladdiisu wanaagsan tahay.
Sidan oo kale, waxaan ognahay haddii ay wax waliba si wanaagsan ula socdaan ama haddii ay suurtagal tahay in la gaadhay waqtigii la beddeli lahaa. Si aad u ogaato haddii xaaladda batteriga ee taleefankeena Android uu yahay mid aan fiicnayn, waxaan haynaa dhowr habab oo aan adeegsan karno. Dhammaantood waxaan ka wada hadli doonnaa hoosta.
1 Adeegsiga lambar taleefanka ah
2 Ku cabir xaaladda caafimaad abka
3 Casharrada kale ee xiisaha leh:
Adeegsiga lambar taleefanka ah
Mid ka mid ah hababka ugu fudud ee aan ku hubin karno xaaladda batteriga, adigoon wax rakibin, waa adoo galaya nambar taleefankeena. Android wuxuu leeyahay lambarro aad u tiro badan taas oo noo oggolaaneysa inaan ku fulino falalka taleefanka. Waana mid aan ku ogaanayno xaalada batteriga qaab fudud. Marka waxaan isticmaali karnaa qaabkan waqti kasta.
Marka hore waxaan ku fureynaa codsiga taleefanka aaladdayada. Markaad gudaha gasho, waa inaan galnaa lambarkan: * # * # 4636 # * # *". Liis ayaa markaa ka furmaya shaashadda taleefanka, oo leh xulashooyin taxane ah. Kuwa ka muuqda shaashadda, midka aan xiiseyneyno waa "Macluumaadka Baytariga". Qaybtaan waxaan ku haynaa xog ku saabsan xaaladdeeda.
Qeybtu waxay na siin doontaa macluumaad gaar ah oo ku saabsan batteriga taleefankeena Android. Dhexdooda waxaan arki doonnaa waxa uu gobolku noo sheego, taas oo noo sheegi doonta inay fiicantahay iyo inay xun tahay. Marka waxay ku timaadaa qaab runtii fudud oo la isku halleyn karo si loo arko in batteriga taleefankeennu si fiican u shaqeynayo ama maya. Marka, waxaan ogaan doonnaa haddii ay tahay inaan tallaabooyin ka qaadno arrintan si aan u xallino dhibaatooyinka suurtagalka ah ee ka dhex jiri kara.
Qaybta xun ee kiiskan ayaa ah in nambarkani uusan ka shaqeyneynin taleefannada oo dhan. Waxaan ku tijaabin karnaa lambarka taleefanka, laakiin soo saarayaasha qaarkood ma shaqeynayo, ama moodooyinka qaar. Laakiin waa mudan tahay in la tijaabiyo, maadaama ay tahay habka ugu raaxada badan ee aan heli karno si aan u hubino xaaladda batteriga.
Ku cabir xaaladda caafimaad abka
Haddii taleefankeenna suurta gal ahayn in la hubiyo xaaladda iyadoo la adeegsanayo lambarkan aan soo sheegnay, markaa waxaan u adeegsan karnaa codsi loogu talagalay qalabka. Waqti ka dib, codsiyada ayaa ka soo baxay Play Store oo naga caawinaya inaan hubino xaaladda taleefanka iyo baytarigiisa. Barnaamijyadan waxaa ka mid ah xulashooyin u muuqda waxqabadkooda wanaagsan, marka waa in lagu xisaabtamo.
CPU-Z waa mid kamid ah kuwa ugu dhameystiran uguna kalsoonida badan arimahan. Waxay na siin doontaa macluumaad aad u sax ah oo ku saabsan xaaladda taleefankayaga Android, sidoo kale ku saabsan batterigiisa. Marka waxaan awoodi doonnaa inaan ku go'aamino xaaladdeeda dhowr tallaabo oo fudud. Codsiga waxaa lagu heli karaa bilaash, inkasta oo uu ku leeyahay wax iibsi iyo xayeysiis gudaha. Waxaa lagala soo bixi karaa hoos:
Markii aan ku soo degsano arjiga taleefankeena, waa inaan tagnaa qaybta Batariga ee halkaas ku taal. Waa qaybtan meesha xaaladda batteriga ee taleefankayaga Android lagu muujiyay. Waxay muujin doontaa haddii ay si sax ah u shaqeyso iyo haddii ay na siiso ismaamul ku filan si wax walba ay si sax ah ugu shaqeeyaan. Haddii aysan si fiican u shaqeyn, waxaa la dhihi doonaa xaaladdiisu waa xun tahay. Marka way fududahay in la arko.
Waxay kuxirantahay waxa codsigu noo sheegayo, waa inaan qaadnaa tallaabooyinka u dhigma ee arrintan la xiriira. Tallaabooyinka mararka qaarkood macnaheedu noqon karo in la beddelo batteriga. Laakiin waxay kuxirantahay nooca taleefanka aad haysato, qaasatan haduu unibody yahay, kharashka ayaa laga yaabaa inuu aad u sareeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo ogaado haddii batteriga taleefankaaga Android uu wanaagsan yahay